ပြည်သူ့ အခွင့်အရေး. အခွင့်အရေး ဆိုသည်မှာ ခိုင်မာတိကျစွာ အဓိပ
ⓘ ပြည်သူ့ အခွင့်အရေး. အခွင့်အရေး ဆိုသည်မှာ ခိုင်မာတိကျစွာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရန် ခက်ပါသည်။ သူ့နေရာနှင့်သူ အလေးအနက်၊ အတိမ်အနက် ကွာခြား နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပြည်သူ ဆ ..